ဘာဝတ်ဝတ်လှတဲ့ Rosé လေး ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ သူမအကြိုက်ဆုံး Stage outfit က ဘယ်ဝတ်စုံလေးလည်း ဆိုတော့ | News Bar Myanmar
ဘာဝတ်ဝတ်လှတဲ့ Rosé လေး ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ သူမအကြိုက်ဆုံး Stage outfit က ဘယ်ဝတ်စုံလေးလည်း ဆိုတော့
အရပ်ရှည်ရှည် ပိန်ပိန်ပါးပါးနဲ့ ခန္တာကိုယ်အချိုးစားလှတဲ့ Rosé အဖို့ သူမနဲ့ မလိုက်ဖက်တဲ့ ဝတ်စုံဆိုတာ ရှားပါတယ်။ YSL brand ambassador လည်း ဖြစ်သူမို့ Rosé ဝတ်စားထားတာကို ကြည့်လိုက်ရင် အမြဲမိမိုက်နေတာ ချည်းပါဘဲ။ ထသွားထလာဝတ်ဆင်တဲ့ အင်္ကျီက ဘာဝတ်ဝတ်ကိစ္စမရှိပေမဲ့ Stage ပေါ်မှာ ဖျော်ဖြေတဲ့အခါ ဝတ်ဆင်ရမဲ့ အဝတ်အစားကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုယ်က Kpop idol ဖြစ်သူမို့ အဝတ်အစားတွေက ဆန်းနေဖို့အပြင် ကပြဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာ သက်တောင့်သက်သာရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ Rosé ဝတ်ဆင်ဖူးတဲ့ Stage outfit တွေဆို ဆန်းဆန်းလေးနဲ့ ရှယ်တွေချည်းပါဘဲ။ ထိုထဲကမှ Rosé အကြိုက်ဆုံး ဝတ်စုံလေးက ဘယ်ဟာလည်း ဆိုတာ ပရိသတ်တွေ သိချင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
“How You Like That” Era တုန်းက ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Korea ရိုးရာဝတ်စုံ Hanbok များ ဖြစ်လေမလား ??
ဒါမှမဟုတ် Coachella မှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဘော်ကြယ်အပြည့်ထိုးထားတဲ့ ဝတ်စုံလေးများ ဖြစ်လေမလား??
“The show” online concert တုန်းက Sour Candy သီချင်းဖျော်ဖြေနေစဉ် ဝတ်ခဲ့တဲ့ ပန်းရောင်ဝတ်စုံလေးများ ဖြစ်လေမလား
Rosé ကတော့ ဒါတွေ တခုမှမဟုတ်ပါဖူးတဲ့။ Rosé ပြောပြခဲ့တာက “ကျွန်မအကြိုက်ဆုံး ဝတ်စုံက “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” မှာ ဖျော်ဖြေတုန်းက ဝတ်ခဲ့တဲ့ အလက်အလက် လေးတွေပါတဲ့ အမည်းရောင် ဝတ်စုံလေးပါ။ အာ့ ဝတ်စုံကို ကျွန်မတကယ် အရမ်းကြိုက်တယ်”
ထိုဝတ်စုံလေးဟာ David Koma ဖန်တီးချုပ်လုပ်ထားတဲ့ “Flower Embroidered Asymmetric Cami Dress” ဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးအားဖြင့် £1,335 GBP or $1,895 USD တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ အင်္ကျီလေးက တကယ်လည်းလှပြီး Rosé နဲ့ လည်း တအားလိုက်ဖက်လှပါတယ်နော်။ မင်မင်ကတော့ Rosé ရဲ့ သဘောထားနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှပါဘဲ။ Rosé ဝတ်ဆင်ဖူးတဲ့ outfit တွေထဲမှာ ကြိုက်မိတာရှိရင် ပရိသတ်တွေလည်း cmt မှာ မန့်သွားပါအုံးနော်။
Next Bamboo in the Rock သီချင်းကို တတိယအကြိမ်သီဆိုခဲ့ပြီး မတူညီတဲ့ခံစားချက်တွေပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ Xiao Zhan »
Previous « Hannam ရပ်ကွက်က ​​​စျေးအကြီးဆုံးအိမ်ရာမှာ တိုက်ခန်းဝယ်ယူလိုက်တဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင် RM နဲ့ Jimin